Eugenia Apartment - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguΕυγενία
Indlu ye-70 sq.m. ibekwe kwindawo yaseRodotopi, e-Ioannina, kwindawo eluhlaza. Yimizuzu eyi-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sase-Ioannina kunye neSibhedlele saseChatzikosta, imizuzu eyi-15 ukusuka kumbindi wesixeko sase-Ioannina kunye nemizuzu engama-25 ukusuka eZagorochoria.
Indawo ye-70 sqm ibekwe kwindawo yaseRodotopi Ioannina kwindawo eluhlaza ngokupheleleyo. Yimizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sase-Ioannina kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka kumbindi wesixeko sase-Ioannina. Ikwayimizuzu engama-25 ukusuka kwiilali zemveli zaseZagorohororia.
Le ndlu yanamhlanje inefenitshala ngokupheleleyo yeyendlu yosapho esanda kwakhiwa enobushushu obuphakathi (ubushushu bangaphakathi buseti ngama-21 degrees), ixhotyiswe ngekhitshi, ifriji, imicrowave, umenzi wekofu, iketile, itoaster, intsimbi yombane, isomisi seenwele, iwasha, isomisi, isomisi, Itafile, iikomityi kunye neemagi zekofu yakho Ibonelela ngazo zonke izinto eziyimfuneko (iitawuli, iishiti, iphepha langasese, ioats, umqhaphu, isixhobo sokususa imake-up, ishampu, ijeli yeshawa, isepha yekhrimu). Indlu yenzelwe ububele bakho obutofotofo, ineyadi kunye nendawo yokupaka isithuthi sakho.
Le ndlu yanamhlanje inefenitshala ngokupheleleyo yendlu yosapho esanda kwakhiwa enobushushu obuphakathi (ubushushu obulinganisiweyo endlwini 21degrees), ixhotyiswe ngekhitshi, ifriji, imicrowave, umenzi wekofu, iketile, itoaster, intsimbi yombane, isomisi seenwele, umatshini wokuhlamba, isomisi, i-dehumidifier, i-tv, izitya, iiglasi kunye neekomityi. Ibonelela ngazo zonke izinto eziyimfuneko (iitawuli, amashiti, iphepha langasese, isepha, umqhaphu, ishampu, ijeli yeshawa, isepha yekhrimu). Le ndlu yenzelwe ububele bakho obutofotofo, inentendelezo kunye nendawo yokupaka isithuthi sakho.
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ezolileyo enento eyomeleleyo yendalo ejikelezwe yimithi, izityalo, ingca kunye neyadi. Kufutshane kakhulu kukho imakethi encinci, indawo yokubhaka, iikhefi, iibarbecues, ikhemesti kunye nebala lemidlalo.
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ezolileyo kunye nendalo enzulu ejikelezwe yimithi, izityalo, ingca kunye neyadi yangasemva. Kufuphi kukho imakethi encinci, ivenkile yokubhaka, iikhefi, iibarbecues, ikhemesti kunye nebala lemidlalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ευγενία
Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi ngayo nantoni na eziyifunayo ngelixa zihleli phezulu okanye ngokuthumela umyalezo.
Iindwendwe zingaqhagamshelana nathi ngayo nantoni na eziyifunayo ngelixa zihleli phezulu okanye zithumela umyalezo.
Inombolo yomthetho: 00000896015